राज्यको ढुकुटीमा ‘चन्द्र’को दाइँ : होटलमा चिकेन करीदेखि पानी खाएको बिलसमेत पर्यटन बोर्डमा ! | Diyopost - ओझेलको खबर राज्यको ढुकुटीमा ‘चन्द्र’को दाइँ : होटलमा चिकेन करीदेखि पानी खाएको बिलसमेत पर्यटन बोर्डमा ! | Diyopost - ओझेलको खबर
राज्यको ढुकुटीमा ‘चन्द्र’को दाइँ : होटलमा चिकेन करीदेखि पानी खाएको बिलसमेत पर्यटन बोर्डमा !
दियो पोस्ट बुधबार, चैत्र १६, २०७८ | २०:२४:३५
काठमाडौं । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई एक आकर्षक पर्यटन स्थलको रुपमा स्थापित गरी पर्यटन व्यावसायको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको नामबाट एउटा बोर्डको स्थापना गरिएको छ,’ नेपाल पर्यटन बोर्डको ऐन, २०५३ उल्लेखित यो शब्दले पर्यटन बोर्ड स्थापनाको उद्देश्य बोकेको छ । तर, ऐनले भनेजस्तो उद्देश्यअनुसार यो संस्था चल्नु त परको कुरा यहाँ आउने नेतृत्वको गलत नियतका कारण बोर्ड नै धराशायी बन्दै गएको छ ।
झण्डै १३ वर्षपछि गत वर्ष फागुनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले उपाध्यक्षको रुपमा नेकपा एमालेको हालका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र रिजाललाई पायो । पदयात्रा व्यावसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका रिजाल पर्यटन व्यावसायीको रुपमा समेत चिनिन्छन् ।
बोर्डको कार्यकारी भूमिका नभएपनि उपाध्यक्ष पदलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । तर, रिजालले आफ्नो पदिय मर्यादा विपरित गतिविधि गर्दा बोर्ड नै धरासायी बन्न पुगेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र विकास गर्ने ठूलो उद्देश्य बोकेको संस्थाको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रहेका रिजालले आफ्ना व्यक्तिगत खर्चपर्चका बिल मात्रै होइन आफ्नो ससुराले लेखेको किताब प्रकाशनका लागि समेत बोर्डको रकम माग गर्ने गरेको लाजैमर्दो तथ्य भेटिएको छ । त्यतिमात्रै होइन जुन रेष्टुरेन्टमा बसेर उनले खाएको हजारौंको बिल पर्यटन बोर्डलाई पेश गरेका छन् । सोही रेष्टुरेन्टका मालिक तथा आधा दर्जन बैंक लुटेको अभियोगमा जेल सजाय भोगेर आएका लिला बहादुर लामालाई नै पर्यटन बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिससम्म गरिएको छ ।
लामाको स्वामित्व रहेको कफि स्केप कम्पनिको बिल रिजालले पर्यटन बोर्डमा पेश गरेका थिए । तर, पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीले उनले पेश गरेको बिल भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो ।
काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित ‘भाउडे’को ब्राण्डबाट चर्चित रेष्टुरेन्ट लिला बहादुर लामाको हो । यो कम्पनिले रिजालको नाममा जारी गरेको बील भुक्तानीका लागि बोर्डसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
२०७८ असार २३ गतेको मितिमा जारी भएको एउटा बिलमा ६ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्य उल्लेख छ । बेलुका ६ बजेर ५३ मिनेटमा जारी भएको यो बिल अनुसार बोर्डको कुनै कार्यक्रम थिएन । रिजालले साथीभाईसँगै रमाईलो गफगाफमा बिताएको उक्त दिनको बिल समेत पर्यटन बोर्डमा पेश गरेका छन् ।
२०७८ साउन १५ मा पर्यटन बोर्डको कुनै कार्यक्रम थिएन । तर, सोहि दिन बेलुका साढे ८ बजे जारी गरेको बिलको कस्टोमरको नाम– चन्द्र रिजाल लेखिएको छ । सोहि दिन उनले २७ प्रकारका मेन्यु खाएको उल्लेख छ । इन्भोइस अनुसार २५ हजार २ सय ९२ रुपैयाँको बिल जारी भएको छ । उक्त बिल उनले पर्यटन बोर्डमा पेश गरेका छन् ।
त्यसको भोलीपल्ट साउन १६ गते पनि सोही रेष्टुरेन्टले अर्को अर्को इन्भोइस जारी गरेको छ । तर, त्यो बिलमा नाम छैन । विभिन्न परिकार खाएबापत २५ हजार एक सय ९७ रुपैयाँको बिल बोर्डको नाममा जारी भएको छ । त्यस्तै २०७८ कार्तिक ८ गते पनि कुनै कार्यक्रम थिएन । तर, रिजालले सो दिनको २ बजेर ५६ मिनेटमा जारी भएको बिल पर्यटन बोर्डमा पेश गरेका छन् । जसमा १८ सय ७० रुपैयाँ उल्लेख छ ।
त्यस्तै साउन १७ गते जारी भएको अर्को बिलमा २८ सय ९७ रुपैयाँ उल्लेख छ । उक्त बिल पनि रिजालले बोर्डमै पेश गरेका छन् ।
२०७८ भदौ १४ को मितिमा इन्भोइस भएको अर्को बिलमा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई कस्टोमर लेखिएको छ । तर, उक्त दिन बोर्डको कुनै पनि कार्यक्रम वा बैठक समेत नभएको पर्यटन बोर्ड स्रोत बताउँछ ।
तर, रिजालले ७ हजार १ सय ९३ रुपैयाँको बिल पेश गरेका छन् । २०७८ असोज ७ गते बेलुका ७ बजेर ५४ मिनेट जाँदा जारी भएको बिलमा ११ सय २४ रुपैयाँ समेत पर्यटन बोर्डकै नाम उल्लेख छ । यो बिल पनि रिजालले बोर्डमै पेश गरेका छन् ।
यसरी रिजालले कुल ७२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ रेष्टुरेन्टमा खाएको बिल राज्यको ढुकुटीबाट पाउनुपर्ने भन्दै पर्यटन बोर्डमा पेश गरेका छन् । जबकी यसरी भुक्तानी लिनु/दिनु दुवै भ्रष्टाचार हो ।
ससुराको किताबको नाममा बजेट कुम्ल्याउने दाऊ !
नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकले नेपालबारे धेरै किताब लेखेका छन् । ती किताब नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रकाशन गरेको पनि होइन । तर, बोर्डले यस्तो किताब प्रकाशन गर्न सके नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्न सक्थ्यो । नेपालबारे नेपालीले थाहा नपाएका तथ्यहरुसमेत विदेशी लेखकहरुले उजागर गरेका छन् । विख्यात इतिहासकार टोनी हेगनले लेखेको नेपालबारेका अधिकांश किताब उनी आफैले प्रकाशन गरेका हुन् । तर, बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालका ससुरा त्रिलोचन ढकाल केही वर्षअघि युरोप घुम्न गएका रहेछन् । उनी युरोप घुम्दा एउटा यात्रा अनुभूति समेत लेखेका रहेछन् ।
ढकालको यात्रा अनुभूतिले न त युरोपका पर्यटक नेपालमा आउँछन् न त त्यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा कुनै योगदान नै पुर्याउँछ । उनै ढकालद्वारा लिखित ‘युरोपमा नेपाली’ नामक यात्रा अनुभूतिको प्रकाशक भने नेपाल पर्यटन बोर्ड लेखिएको छ । तर, पर्यटन बोर्ड प्रकाशक भएको कितावको मुल्य ४ सय रुपैयाँ राखिएको छ ।
‘एकातिर किताब प्रकाशन गर्ने खर्च बापत पर्यटन बोर्डबाट ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानीको लागि पेश गर्ने अर्कोतिर सोही किताब बेचेर आएको आम्दानी आफैले उपयोग गर्ने ढकालको योजना थियो,’ स्रोतले भन्यो,‘तर, बोर्डका सिइओ धनन्जय रेग्मीले बोर्डलाई आर्थिक भार पर्ने र कुनै उपलब्धी समेत नहुने देखेर रोक्नु भयो । त्यसपछि नै रिजालजी बोर्डका सिइओ विरुद्ध कम्मर कसेर विरोधमा लाग्नु भयो । उहाँकै नेतृत्वमा सिइओ रेग्मीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस समिति बनेको थियो । त्यो सिफारिस समितिको प्रतिवेदन नै हास्यास्पद छ ।’
पर्यटन बोर्ड संचालन ऐन, २०५३ तथा नियमावली अनुसार उपाध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यलाई कुनै पनि सुविधा दिन मिल्दैन । तर, ऐन तथा नियमावली विपरित रिजालले भने हरेक दिन होटलमा बसेको, खाएको बिल बोर्डमा पेश गरेका छन् ।
‘लुटेरा र भ्रष्टहरुकै रजगज छ : पूर्व सिइओ निरौला
पर्यटन बोर्डका पूर्व सिइओ सुवास निरौला रिजालको धन्दा नै यही रहेको बताए । ‘उहाँको कुनै कम्पनि छैन । उहाँ खासमा सहकारी संचालक हो । म बोर्डमा कार्यरत रहँदा टिम्स कार्डको पैसा खान दिएन भनेर म विरुद्ध लागे,’ निरौलाले भने,‘उहाँले गर्ने नै यस्तै हो । अहिले पर्यटन विभागको एउटा पर्यटन महासाखाले ४ सय रुपैयाँ तिर्यो भने एउटा कम्पनि दर्ता गरिदिइ हाल्छ । विदेशी ल्याउने नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने होइन त्यहाँ बसेर राजनीति गर्ने हो ।’
उनका अनुसार बोर्डको नियमावली तथा ऐनमा उपाध्यक्ष वा सदस्यलाई कुनै पनि सुविधा नभएपनि बोर्ड सदस्य तथा उपाध्यक्षले आफूखुसी निर्णय गराएर लिने गरेका छन् ।
सम्पर्कमा आएनन् रिजाल
बोर्ड ऐन तथा निमावली विपरित होटलमा आफूले खाएको बसेको बिल समेत राज्यको ढुकुटीबाट दाबी गर्ने रिजालको प्रतिक्रियाका लागि उनको मोबाइलमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् ।
बुधबार, चैत्र १६, २०७८ | २०:२४:३५